Umdiliya - Wikipedia
Umdiliya sisityalo esigwencelayo oko sikwenza ngokusebenzisa isiqu okanye ii-runners zaso. Ezi-runners zisuka emhlabeni, zize zigwenzele zibheke phezulu xa imeko izivumela. Yindlela eziqhele ukukhula ngayo ezi zityalo, singathi mhlawumbi yindlela eziphila ngayo le yokusebenzisa imithi ukuze ukukhaynya kufikelele kwazi ukufikelela ekukhanyeni kwelanga okufikelela kwizinto zendalo eziphila emhlabeni.
E-United Kingdom, igama elithi "vine" libhekisa ngokukodwa wee-grapes i-grapevine, libe lona igama elithi "isigwenceli" lisetyenziswa kuzo zonke izityalo ezikhula ngokuzijijela zigwencela ukubheka phezulu. I-grapevine, eyi-genus Vitis, ithwala ii-berries ezinokwenziwa zibe yiwayini. E-United States, zonke ke ezi zityalo zigwencelayo zibengamajiko-jiko ukubheka phezulu zibizwa ngokuba yimidiliya okanye zii-ivies okanye ke ngamanye amaxesha kuthiwe zii-creepers (njenge-Virigina Creeper).
Inkoliso yemidiliya ibazizityalo ezizintyatyambo. Ezi ke zisenokwahlulwa-hlulwa zibe yimidiliya eziinkuni mokanye ezii-lianas, enjenge-wisteria, i-kiwifruit, kunye ne-ivy exhaphakileyo, nemidiliya e-herbaceous (engezonkuni), efana ne-morning glory.
Funda nali elinye iphepha elithetha ngesi sihloko. [tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]
Retrieved from "https://xh.wikipedia.org/w/index.php?title=Umdiliya&oldid=32349"
This page was last edited on 14 Eyo Mnga 2020, at 03:04.